Ergo Uu Hogaaminayo Wasiir Koowaad Dowladda Soomaaliya Ayaa Durbaba U Duushay Dalka Qatar + Sawiro – Banaadir weyne
Ergo Uu Hogaaminayo Wasiir Koowaad Dowladda Soomaaliya Ayaa Durbaba U Duushay Dalka Qatar + Sawiro
Muqdisho (WBW: The GBM) – Wasiir Koowaadka Dowladda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, iyo ergo uu horkacayaba ayaa lagu soo waramayaa in si deg-deg ah ay maanta ugu duuleen Dalka Qatar.
Warka wuxuu ku darayaa in duulitaanka deg-dega ah ee maanta ee Wasiir Koowaad Kheyre iyo ergadiisaba uu ka dambeeyay markii uu Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hada ku sugan Dalka Sacuudiya uu dhawaantan Magaalada Maka uu kula kulmay Wasiir Koowaadka Qatar Shiikh Cabdullaahi Bin Naasir Bin Khaliifa Al Taani.
26-dii bishii Febraayo ee sanadkan ay aheyd markii uu Madaxweyne Farmaajo uu booqday Dalka Qatar, waxaana markaasi loogu deeqay lacag dhan 20 Milyuun oo Doolarka Mareykan ah.
Markii ugu horeysay ee uu Wasiir Koowaad Xasan Cali Kheyre uu booqdo Dalka Qatar, waxaa ay aheyd bartamihii bishii Maajo ee sanadkii 2017-dii.
Waxaa xigtay in 12-dii Disheember, sanadkii 2018-dii, uu si deg-deg ah ugu duulo Dalka Qatar maadaama ay Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ay 9-kii Disheember ay Mooshin ka gudbiyeen Madaxweyne Farmaajo isla markaana ay u gudbiyeen Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya.
30-ka bisha Maajo oo shalay-maantaan aheyd, waxaa Dalka Soomaaliya loo soo magacaabay Ergiga Cusub ee Qaraamida Midowday oo magaciisa yahay Jeemis Kiristoofer Iswaan (James Christopher Swan) oo u dhashay Dalka Mareykanka maadaama Ergigii Hore Nikolaas Heysom (Nicholas Haysom) ee la raacdeeyay uu u dhashay Dalka Koofur Afrika.